Global Voices teny Malagasy » ‘Rakibolan-dresaka’ Mampita ny Tenin’ny Olona Teratany Ainu Ao Japana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Novambra 2016 17:20 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Mpihira Ainu tao amin'ny Tranombakoka Ainu ao Hokkaido, Japana. Pikantsary avy amin'ny fantsona YouTube Andrew Jones Productions .
Miezaka miaro sy mampita ny teny Ainu ifampiresahan'ireo mponina teratany ao amin'ny nosy avaratra-atsinanan'i Japana ao Hokkaido sy ao amin'ny sisintanin'ny nosy Rosiana ao avaratra ny “rakibolan-dresaka” antserasera  nivoaka voalohany tamin'ny taona 2009. Araka ny filazan'ny UNESCO, valo no isan'ny teny ao Japana izay atahorana hanjavona tanteraka , ary loha-laharana amin'izany ny teny Ainu.
Ahitana fiarahamiasa eo amin'ireo mpiteny Ainu, ny Fandaharan'asa Fandraketana ny Teny An-dalam-pahaverezana (ELDP) ao amin'ny Sekoly Fandalinana Tatsinanana sy Afrikana (SOAS), ny Arcadia Trust , sy Anna Bugaeva, mpikaroka momba ny haiteny ao amin'ny Ivon-toerana Fianarana Fandalinana Waseda (WIAS) ao Japana ny tetikasa. Ny tanjon'ny tetikasa antserasera, vita tamin'ny taona 2009, dia tsy ny hanampy hiaro sy hampita ny teny Ainu ihany fa manome ihany koa fitaovam-pitehirizana maharitra sy azo antoka, mba hahafahan'ny olona mahita izay fandraketana natao ho an'ny teny, iray sy handrisihana ny fiarahamiasa iraisam-pirenena eo amin'ireo mpikaroka, ary manome toro-hevitra sy ny fiarahamiasa ho an'ny tetikasa mitovy amin'izany amin'nireo teny an-dalam-pahaverezana hafa manerantany.
Miaro sy mampiseho ny Ainu hifampiresahana ao amin'ny aterineto, ary azo jerena ny Rakibolan-dresaka Ainu. Misy ihany koa ny takelaka ho an'ny haiteny , sy ny fanamarihana antsipirihany momba ny fomba fampiasa ny loharano antserasera .
Pikantsarin'ny fitaovana fianarana ny teny ao amin'ny aterineto ‘Ainu Talking Dictionary’ .
Misy ny filàna maika hiarovana ny teny Ainu. Na dia sarotra aza ny mamaritra ny isa — satria tsy tafiditra amin'ny Fanisam-bahoaka Japoney ny resaka ara-poko  — tombanana ho 25.000 fotsiny ny Ainu niangana ao  Japana, izay vitsy noho ireo vondron'ny tompon'ny teny (mpampiasa ny teny) Ainu . Mponina teratany ao Hokkaido, avaratra-atsinanan'i Japana ny vahoaka Ainu, ary ao amin'ireo andiana nosy ao avaratr'i Japana ao amin'ny Farany Atsinanan'i Rosia. Raha nanapa-kevitra hanjanaka an'i Hokkaido sy Sakhalin tamin'ny taona 1850 i Japana, dia namidirina ho isam-bahoaka ny Ainu, ary napetraka amin'ny vala manokana, ary resin'ny aretina vaovao nampidirina.
Ankehitriny, velona indrindra amin'ny fisarihana mpizaha tany sy ny tranombakoka ao Hokkaido sy Tokyo ny kolontsaina Ainu ao Japana .
Manandrana ny mukkuri , fitaovana nentim-paharazana Ainu ny mpianatra. “Fitaovana manana anarana mahafinaritra izany!” miza-draharaha amin'ny dihy, fitantarana, sy ny fomba amam-panao ara-kolotsaina hafa ny mpianatra. – Asahi Nomerika.
Tamin'ny taonjato faha-20, nanampy nampiroborobo ny kolontsaina teny Ainu tao Japan tamin'ny alalan'ny boky fanta-daza tahaka ny ‘Ala Ny Taninay Tamin'izany’  ilay zokiolona Ainu sady mpanao politika Shigeru Kayano , maty tamin'ny taona 2006. Namokatra boky fianarana tsotra Ainu ihany koa i Kayano.
[…] Ity no fizarana voalohany amin'ny Rakibolan-dresaka Ainu avy amin'i Shigeru Kayano. Zatra ny kolontsaina Ainu tanteraka aho taloha ary nividy ity boky ity. Na dia halako aza ny lalao an-dahatsary karazana Mpiady An-dalambe, tsy maintsy nianatra ny anaran'ireo mpilalao fototra Ainu ao amin'ny lalao Samurai Shodown avy amin'ny SNK aho.
Lasa lavitra noho ireo andiana Kayano amin'ny rakibolana printy Japoney-Ainu ny Rakibolan-dresaka teny Ainu . Ny rakibolan-dresaka dia anisan'ny tetikasam-pikarohana “Fandraketana ny Tenim-paritra Saru amin'ny teny Ainu” avy amin'i Anna Bugaeva , Profesora PhD Lefitra momba ny Haiteny ao amin'ny Ivon-toerana Waseda amin'ny Fianarana Lalindalina (WIAS), Oniversite Waseda ao Tokyo, Japana.
Mifototra amin'ny rakibolana nangonin'i Kotora Jinbo sy Shouzaburo Kanazawa ny tetikasa, navoaka voalohany tamin'ny taona 1898. Nianatra Ainu mba hifandraisana amin'ny olona teratany monina tao Hokkaido i Jinbo, mpandrefy tany . Nandrakitra teny sy andian-teny i Kanazawa, mpandalina ny teny, mba hamorona rakibolana mety hanampy hampita ny teny Ainu ho any amin'ny taonjato faha-21.
Araka ny filazan'i Bugaeva :
Ahitana fahadisoana, sy teny sarotra azo ary koa fehezan-teny diso (fomba fiteny tsy azo eritreretina akory amin'ny fitsipi-pitenenana Ainu) ny rakibolana niandohan'i Kotora Jinbo sy Shozaburo Kanazawa. Nofafanay ireo teny sy ohatra rehetra mampisalasala, sy ireo singa tena samihafa tanteraka tamin'ny nandrenesana an'i Setsu Kurokawa ary ireo teny tsy nahazatra azy. Nakambana ho iditra iray ny iditra roa nifanosona tamin'ny ankapobeny. Na izany aza, satria noraketina nisaraka ireo tahiry amim-peo sy tamin'ny lahatsary, dia indraindray tsy mitovy amin'ny lahatsary ny fomba fiteny Ainu noraisina tamin'ny fandraisam-eo. Amin'izany tranga izany ihany, nanapa-kevitra izahay fa misaraka ireo fomba fiteny ireo ary samy nampidirina anaty lisitra izy roa ireo. Tamin'ny farany, nahazo iditra 3467 izahay. Ho an'ireo teny tsy fahita firy, nohamarininay raha nampiasaina tamin'ny rakibolana izy ireo, ary nanampy fanamarihana tamin'izy ireo.
Ankoatra ireo fanamarihana efa voasoratra tany am-boalohany, nomena ihany koa ireo torohay isan-karazany izay manampy amin'ny fianarana ny teny Ainu, anisan'izany ny fandika-teny mahazatra, ny fanoratana amin'ny endri-tsoratra Romàna nohavaozina sy fanoratana ny teny Ainu amin'ny endri-tsoratra katakana (fomba famakiana isaky ny vanin-teny Japoney), fanazavana (rakibolana) sy fandikana ho amin'ny teny Anglisy, sns. Noho ny fanampian'i Setsu Kurokawa, teratany mpiteny ny tenim-paritra Saru (Nukibetsu), afaka namoaka raki-peo tamin'ny teny AInu tao amin'ny tranonkala izahay. Naharay valin-teny sy fanehoan-kevitry marobe avy amin'ny mpianatra sy mpikaroka momba ireo votoaty ireo izahay. Na izany aza, niatrika olana ara-bola izahay raha nanamboatra ny rakibolana, ary mbola misy ny olana sasany ara-teknika.
Niara-niasa tamin'i Setsu Kurokawa i Bugaeva mba handrakitra ny fanononana teny sy andian-teny ampiasaina amin'ny Rakibolana miteny Ainu. Lehibe tamin'ny fandrenesana ny teny Ainu i Kurokawa, zokiolona Ainu teraka tamin'ny taona 1926 tany Nukibetsu , ao atsimo-andrefan'i Hokkaido:
Raha mbola zaza i Setsu Kurokawa (teraka tamin'ny 5 Mey 1926), tamin'ny fiafaran'ny taompolo 1920, fianakaviana Ainu marobe no nijanona tsy niteny Ainu intsony tao an-trano . Raha heverina izany, ambony ihany ny fifehezan'i Setsu Kurokawa ny teny Ainu. Noho izy nokarakarain'ny raibeny sy renibeny no anton'izany. Na izany aza, satria tsy ampiasaina amin'ny andavan'androm-piainana ny teny Ainu, sarotra ny mandrakitra fanambarana tampoka amin'ilay fiteny. Amin'ity raki-peo ity, tsy fiteny kibo saoky ny nahiny an'i Setsu Kurokawa ny teny sy ny fomba fiteny, fa kosa mifototra amin'ny tahiry am-peo Ainugo kaiwa jiten (rakibolan-dresaka Ainu). Mandritra ny fandraketana, mamaky teny sy fomba fiteny ao amin'ny Ainugo kaiwa jiten i Anna Bugaeva, ary averin'i Setsu Kurokawa amin'ny fombany manokana izany. Mifototra amin'ny Ainugo kaiwa jiten ireo fomba fiteny amin'ny teny Ainu amin'ity raki-peo ity ary tsy tena mifanaraka tanteraka amin'ny fitenin'i Setsu Kurokawa manokana.
Nampahafantarina tamin'ny vondrona mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Ainu ao Tokyo tao amin'ny Foibe Ara-kolontsaina Ainu (izay manana loharanom-baovao antserasera natokana amin'ny fampitàna ny teny Ainu ao aminy) ny rakibolana vitan'i Bugaeva tamin'ny Febroary 2009. Fitaovana antserasera noforonina tamin'ny fiarahamiasa amin'i Shiho Endo tonian-dahatsoratra Japoney sy i David Nathan, programera (talen'ny ELAR, SOAS, Oniversiten'i Londra) manana iditra ara-javakanton'ny vondrom-piaraha-monina Ainu, ary niarahana tamin'i Tamami Kaizawa mpandravaka sy mpanome bika tranonkala.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/25/92511/
 “rakibolan-dresaka” antserasera: http://lah.soas.ac.uk/projects/ainu/intro.html
 valo no isan'ny teny ao Japana izay atahorana hanjavona tanteraka: https://globalvoices.org/2014/03/01/japans-endangered-languages-still-considered-mere-dialects/
 Fandaharan'asa Fandraketana ny Teny An-dalam-pahaverezana (ELDP) : https://www.soas.ac.uk/linguistics/research/research-clusters/documentation-and-description-of-endangered-languages.html
 Ivon-toerana Fianarana Fandalinana Waseda (WIAS) : http://www.waseda.jp/wias/eng/
 Ainu hifampiresahana : http://lah.soas.ac.uk/projects/ainu/dict.html
 takelaka ho an'ny haiteny: http://lah.soas.ac.uk/projects/ainu/dict.html#
 resaka ara-poko: https://www.waseda.jp/wias/eng/achievement/bulletin/data/a_bugaeva_2010.pdf
 25.000 fotsiny ny Ainu niangana ao: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/new_jittai.htm
 vitsy noho ireo vondron'ny : https://en.wikipedia.org/wiki/Ainu_language#cite_note-5
 ‘Ala Ny Taninay Tamin'izany’: http://www.japantimes.co.jp/culture/2015/09/12/books/book-reviews/land-forest-depicts-life-hokkaido-indigenous-ainu/#.V38MPesrKVN
 mpilalao fototra Ainu : https://en.wikipedia.org/wiki/Nakoruru
 lalao Samurai Shodown avy amin'ny SNK : http://www.neogeofun.com/samsho2-2
 Jinbo, mpandrefy tany: https://books.google.ca/books?id=W5DKfJsPv2sC&pg=PT110&lpg=PT110&dq=Kotora+Jinbo+ainu&source=bl&ots=Xv1Cdvd9fV&sig=s9BaWHHLKoaIUgXPQdVVRgaXjWE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwih68LU8uLNAhUS22MKHQsQBpEQ6AEIKDAC#v=onepage&q=Kotora%20Jinbo%20ainu&f=false
 Araka ny filazan'i Bugaeva: http://ainutopic.ninjal.ac.jp/en/
 Nampahafantarina : https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/5110/2/5110.pdf
 mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Ainu ao Tokyo : http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/tokyo%E2%80%99s-thriving-ainu-community-keeps-traditional-culture-alive
 Foibe Ara-kolontsaina Ainu : http://www.frpac.or.jp/english/details/1ainu-language-education.html